भूकम्पिय डायरी: April 2015
सर्बप्रथम त आजको यस बिनासकारी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पुर्णप्रति श्रद्दाञ्जली, सम्बन्धित परिवारजनमा हार्दिक समबेदना।
आज काठमाण्डौं उपत्यका लगायत देशैभरी त्रास फैलीरहेको छ। के अझै पनि भुईचालो पर्किन्छ? कति समय फर्किन्छ? कहिले सम्म यस्तो होला?? यस्ता प्रश्नहरु समाजिक संजाल मार्फत धेरै देख्न पाएँ। यसै सम्बन्धि केही प्रक्रिया र तथ्यहरु यहाँ लेख्न लागेको छु।
किन गईरहन्छ यसरी ठुलो पछी स-साना भुकम्प?
कुनै एक ठुलो भुकम्प पछि आउने साना साना भुकम्पका धक्काहरुलाई आफ्टरसक (AfterShock) भनिन्छ। यदी अझै ठुलो भुकम्प आएमा यस अघिका भुकम्पलाई फरसक(ForeShock) ठुलो भुकम्प अघिका धक्का भनेर भनिन्छ।
आजको भुकम्पको धक्का युरेसियन प्लेट र भारतिय प्लेटको बिचमा जम्मा हुदै गएको शक्ति बाहिर निस्कदा आएको हो। बैज्ञानिक अनुसन्धानहरुले यि दुई प्लेटहरु बार्षिक केही सेन्टिमिटरको दरले एक भित्र अर्को घुसिरहेको देखाएका छन।
जब मुख्य भुकम्पको धक्का आयो तब ति दुई प्लेटहरु केही छुट्टिए या भित्र छिरे तर एकै पटकमा त्यहाँ जम्मा भएको शक्ति बाहीर नअाउने सम्भावना धेरै हुन्छ र त्यो शक्ति बिस्तारै बाहीर आउन थाल्छ साना साना भुकम्पको रुपमा। यसरी आउने भुकम्पका केन्द्र बिन्दुहरु केही किलोमिटरको दुरीमा रहन सक्छन। जस्तै आज लमजुङमा गएको मुख्य भुकम्प पछि रसुवा सहित अन्य बिबिध ठाउँलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर धेरै स-साना भुकम्प गए।
यस भुकम्पले हाम्रो जमिनमुनीको मुख्य चट्टान चिरिएको छ जहाँबाट यसमा संचित शक्ति बाहिर आयो, त्यसैले अझै पनि चिरिने क्रम पुर्ण रुपमा नरोकिएसम्म भुकम्पका धक्का हामीले महसुस गरिरहनेछौं।
कहिले सम्म चल्ला यो क्रम?
कुनैपनि ठुलो भुकम्प पछि साना साना भुकम्पहरु कति जान्छन र कहिले सम्म जान्छन भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न तर के कुरा हो भने ठुला ठुला भुकम्प पछि साना भुकम्प अबस्य आउछन। जापानमा सन २०११ मार्चमा गएको महाभुकम्प पछि करिब २० दिनसम्म यस्ता भुकम्पहरु गए। तर हाम्रोमा आज गएको भुकम्प त्यती ठुलो नभएकोले यति धेरै दिन सम्म जारी रहला बन्न सकिन्न। तर जापानमै २००३मा गएको ८ रेक्टरस्केलको भुईचालो पछि करिब ६ दिनसम्म स-साना भुकम्प आईरहेका थिए।
नेपालमा आज बेलुकी ७ः५५ सम्मको रेकर्ड अनुसार २६ वटा स-साना भुकम्प गएका छन तर यो क्रम कहिले रोकिएला?? हामीले केही पुराना तथ्यहरु हेर्ने हो भने यो क्रम भोली पर्सी सम्म रहने निकै धेरै संभावना छ।
हेरौं ति भुकम्प पछिका स-साना भुकम्प कति र कहिले गए।
अब आफैं पनि थोरै बुझ्नुभयो कि.... अझै केही समय सजग रहेर सुरक्षित रहनुहोला। साथसाथै सजगताका साथ आ-आफ्नो ठाऊंमा उद्दार र सहयोगमा पनि लाग्नुहोला।
यो बिपत्ती पहिले आँकलन नगरीएको होईन, मैले नै भुकम्प दिबसको सन्दर्भमा लेखेको पोस्ट हेर्नुहोला यो पोस्ट जहाँ यस्तै स्थितिको चित्रित गरिएको छ, तर अब पहिले के भनियो भन्दा पनि अहिले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै महत्वपुर्ण हो।
*यहाँ राखिएका डाटाहरु ( NIED, USGS) बाट लिएर प्रसोधन गरिएका हुन
किन र अझै कति आउला त यो भुईचालोको झट्का? हेरौं केह...